शिखर इन्स्योरेन्सको हकप्रद शेयर हितग्राही खातामा
भदौ २५ , काठमाडौं । गत भदौ १४ गते नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सूचीकृत भएको शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको हकप्रद शेयर सम्बन्धित शेयरधनीहरुको हितग्राही खातामा जम्मा भएको छ । कम्पनीले ३० प्रतिशत हकप्रद शेयर हितग्राही खातामा जम्मा गरेको हो ।
सूचीकृत भएको दोस्रो दिनदेखि कारोबारयोग्य भएको उक्त कम्पनीका हकप्रद शेयर हितग्राही खातामा जम्मा भएपश्चात अब भने कारोबार गर्न सकिने भएको छ । उक्त कम्पमनीले गत असार १४ गतदेखि साउन ४ गतेसम्म उक्त हकप्रद शेयर विक्री गरेको थियो ।
सो समयमा विक्री हुन नसकेको शेयर शेयर साउन २१ देखि २८ गतेसम्म लिलामी प्रक्रियाबाट विक्री गरेको थियो । कमपनीले हाल कायम चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब ५ करोड ७३ लाख १० हजार को आधारमा ३० प्रतिशत हकप्रद विक्री गरेको हो ।
हकप्रद पश्चात कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब ३७ करोड ४५ लाख ३ हजार पुगेको छ ।